Venom (2018) | MM Movie Store
Eddie Brock ဆိုတဲ့ သတငျးထောကျတဈယောကျဟာ လူတှကေို တရားမဝငျစမျးသပျမှုတှလေုပျနတေဲ့ကုမ်ပဏီကွီးတဈခုကို ဝငျထောကျလှမျးရငျး ပွငျပကမ်ဘာသကျရှိတဈကောငျဖွဈတဲ့ Venom နဲ့ ထိတှေ့ ကူးစကျခံခဲ့ရတယျ။
အဲအခြိနျမှာပဲ ကုမ်ပဏီကွီးကသူ့အမွငျ သူ့ရညျမှနျးခကျြအတှကျ တဈကမ်ဘာလုံးကို ဒုက်ခရောကျဖို့ ကွိုးပမျးလာတဲ့အခါမှာတော့ Eddie ဟာသူ့အပျေါမှာ ကပျမှီပွီး နနေတေဲ့ Venom နဲ့ အတူ ပူါးပေါငျးတားဆီးဖို့ ကွိုးပမျးရပါတော့တယျ။
Review Critic အမြားစု မကွိုကျသလောကျ Fan အမြားစု ကွိုကျကွတယျ။ကြှနျတော့အနနေဲ့ကတော့ Venom character နဲ့ ပတျသကျပွီး အမြားကွီး မသိပါဘူး။Spider-Man video game တှထေဲမှာလောကျပဲ တှဖေူ့းတာ မြားတယျ။ဆိုတော့ ကြှနျတော့ အမွငျက နညျးနညျးကှဲရငျ ကှဲနိုငျသပ။အရငျဆုံး မကောငျးဘူး ထငျတာတှေ ပွောပါမယျ။
မငျးသား Tom Hardy က Eddie အနနေဲ့ တျောတျောလေးမိုကျပမေဲ့ အစပိုငျးမှာတော့ Tom Hardy ပိုဆနျနတေယျလို့ထငျတယျ။သူ့ ပုံမှနျ acting စတိုငျနဲ့ တှရေ့တာ မြားတယျ။ဒါပမေဲ့ နောကျပိုငျး Venom နဲ့ တှပွေီ့းနောကျပိုငျးမှာတော့ တျောတျောမိုကျတယျ။နောကျ ဇာတျလမျးနဲ့ဇာတျညှနျးမှာ တဈခါတဈလေ သိပျအားမရဖွဈပါဘူး။
တခြို့ဇာတျဝငျခနျးတှကေ နညျးနညျးလေး ရှညျနသေလို သိပျပွီး မလိုအပျသလို ခံစားရတယျ။နောကျဆုံးတဈခုကတော့ Visual ပိုငျး။Venom နဲ့ Riot တို့ ဗွငျးကွတဲ့အခနျးတှမှော တျောတျောလေး ကွညျ့ရအဆငျမပွဘေူး။
ညဘကျကွီး မညျးမညျးအကောငျ ၂ ကောငျ ခတြာကို 3D နဲ့အနီးကပျမွငျရတော့ ကွုံးတော့ ကွုံးနတောပဲ ဒါပမေဲ့ဘာမှနျးညာမှနျး သိပျမသဲကှဲဘူး။Venom Character ကွီးက ပုံဖျောထားတာ မိုကျတော့ မိုကျပမေဲ့စိတျထဲမှာ တဈခုခုလိုနသေလိုမြိုးပဲ
(Spidey logo, maybe??) သဘောကမြိတာတှဆေိုရငျတော့ Venom ဟာ MCU ကားတှလေိုမဟုတျဘူး။Dark, brutal ဖွဈတယျ။ PG-13 နဲ့ သှားတယျဆိုတော့ နောကျပိုငျး Tom Holland ရဲ့Spider-Man နဲ့ တှဲမတှဲ မပွောတတျပမေဲ့ ကြှနျတော့ စိတျထဲကတော့သှားမတှဲဘဲ သကျသကျ ခှဲထှကျတာမြိုး ပိုလိုခငျြမိတယျ။
Venom နဲ့ Eddie တို့နှဈယောကျကွားက ခြိတျဆကျမှု နဲ့ တဈယောကျကို တဈယောကျမှီတီနမှေုကို ပွသှားတာလညျး တျောတျောလေးကောငျးတယျ။တဈခကျြတဈခကျြ ရယျနရေတာမြားတော့ သိပျကွီးအဆငျမပွပေမေဲ့ still awesome ပဲ။ Visual တှဆေိုလညျးအမြားစု ကောငျးတယျ။
ရဲတှနေဲ့ ဗွငျးတဲ့အခနျးဆို တျောတျောလေး အားရဖို့ကောငျးတယျ။Venom ရဲ့ strength ကို တျောတျောလေးမွငျရတယျ။Venom နဲ့ Eddie နရောက Tom Hardy ကလညျး အစပိုငျးလေး နညျးနညျးအဆငျမပွသေလိုဖွဈသလောကျ နောကျပိုငျးတှမှော တကယျ့ perfect cast ပဲ။Venom ဟာ တကယျ့ perfect ဖွဈတဲ့ ကားတဈကားတော့ မဟုတျပါဘူး။
ဒါပမေဲ့ ဆိုးဝါးနတေဲ့အထဲ ပါတဲ့ကားတဈကားလညျး မဟုတျဘူး။ကြှနျတျောတို့ကိုယျတိုငျကတော့ တဈကားလုံးနီးပါး enjoy ဖွဈခဲ့တဲ့ ကားတဈကားပါ
Eddie Brock ဆိုတဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်ဟာ လူတွေကို တရားမဝင်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုကို ဝင်ထောက်လှမ်းရင်း ပြင်ပကမ္ဘာသက်ရှိတစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ Venom နဲ့ ထိတွေ့ ကူးစက်ခံခဲ့ရတယ်။
အဲအချိန်မှာပဲ ကုမ္ပဏီကြီးကသူ့အမြင် သူ့ရည်မှန်းချက်အတွက် တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဒုက္ခရောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းလာတဲ့အခါမှာတော့ Eddie ဟာသူ့အပေါ်မှာ ကပ်မှီပြီး နေနေတဲ့ Venom နဲ့ အတူ ပူါးပေါင်းတားဆီးဖို့ ကြိုးပမ်းရပါတော့တယ်။
Review Critic အများစု မကြိုက်သလောက် Fan အများစု ကြိုက်ကြတယ်။ကျွန်တော့အနေနဲ့ကတော့ Venom character နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများကြီး မသိပါဘူး။Spider-Man video game တွေထဲမှာလောက်ပဲ တွေ့ဖူးတာ များတယ်။ဆိုတော့ ကျွန်တော့ အမြင်က နည်းနည်းကွဲရင် ကွဲနိုင်သပ။အရင်ဆုံး မကောင်းဘူး ထင်တာတွေ ပြောပါမယ်။
မင်းသား Tom Hardy က Eddie အနေနဲ့ တော်တော်လေးမိုက်ပေမဲ့ အစပိုင်းမှာတော့ Tom Hardy ပိုဆန်နေတယ်လို့ထင်တယ်။သူ့ ပုံမှန် acting စတိုင်နဲ့ တွေ့ရတာ များတယ်။ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်း Venom နဲ့ တွေ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ တော်တော်မိုက်တယ်။နောက် ဇာတ်လမ်းနဲ့ဇာတ်ညွှန်းမှာ တစ်ခါတစ်လေ သိပ်အားမရဖြစ်ပါဘူး။
တချို့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေက နည်းနည်းလေး ရှည်နေသလို သိပ်ပြီး မလိုအပ်သလို ခံစားရတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ Visual ပိုင်း။Venom နဲ့ Riot တို့ ဗြင်းကြတဲ့အခန်းတွေမှာ တော်တော်လေး ကြည့်ရအဆင်မပြေဘူး။
ညဘက်ကြီး မည်းမည်းအကောင် ၂ ကောင် ချတာကို 3D နဲ့အနီးကပ်မြင်ရတော့ ကြုံးတော့ ကြုံးနေတာပဲ ဒါပေမဲ့ဘာမှန်းညာမှန်း သိပ်မသဲကွဲဘူး။Venom Character ကြီးက ပုံဖော်ထားတာ မိုက်တော့ မိုက်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာ တစ်ခုခုလိုနေသလိုမျိုးပဲ
(Spidey logo, maybe??) သဘောကျမိတာတွေဆိုရင်တော့ Venom ဟာ MCU ကားတွေလိုမဟုတ်ဘူး။Dark, brutal ဖြစ်တယ်။ PG-13 နဲ့ သွားတယ်ဆိုတော့ နောက်ပိုင်း Tom Holland ရဲ့Spider-Man နဲ့ တွဲမတွဲ မပြောတတ်ပေမဲ့ ကျွန်တော့ စိတ်ထဲကတော့သွားမတွဲဘဲ သက်သက် ခွဲထွက်တာမျိုး ပိုလိုချင်မိတယ်။
Venom နဲ့ Eddie တို့နှစ်ယောက်ကြားက ချိတ်ဆက်မှု နဲ့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်မှီတီနေမှုကို ပြသွားတာလည်း တော်တော်လေးကောင်းတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက် ရယ်နေရတာများတော့ သိပ်ကြီးအဆင်မပြေပေမဲ့ still awesome ပဲ။ Visual တွေဆိုလည်းအများစု ကောင်းတယ်။
ရဲတွေနဲ့ ဗြင်းတဲ့အခန်းဆို တော်တော်လေး အားရဖို့ကောင်းတယ်။Venom ရဲ့ strength ကို တော်တော်လေးမြင်ရတယ်။Venom နဲ့ Eddie နေရာက Tom Hardy ကလည်း အစပိုင်းလေး နည်းနည်းအဆင်မပြေသလိုဖြစ်သလောက် နောက်ပိုင်းတွေမှာ တကယ့် perfect cast ပဲ။Venom ဟာ တကယ့် perfect ဖြစ်တဲ့ ကားတစ်ကားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ဆိုးဝါးနေတဲ့အထဲ ပါတဲ့ကားတစ်ကားလည်း မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတော့ တစ်ကားလုံးနီးပါး enjoy ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကားတစ်ကားပါ